အိုပါးတို့ရှိရာနိုင်ငံကို သွားတော့မယ်ဆိုရင် – Trend.com.mm
Posted on April 22, 2018 April 19, 2018 by San Wadi Hnin
ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးတွေရဲ့အသည်းနှလုံးကိုအပိုင်သိမ်းပိုက်ယူငင်ထားတဲ့ အသက်နဲ့မမျှအောင်ကိုချောမောစတိုင်ကျလွန်းလှတဲ့ အိုပါးတို့ရှိရာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြောင်းမသိချင်ကြဘူးလား ကလေးတို့ရေ… 😛 ခုပြောပြမှာကတော့ သင်ကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအလည်အပတ်အနေနဲ့ခဏတာသွားမလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိုပါးချန်းယောလ်တို့ မှင်စာ ဒိုဂယ်ဘီဦးလေးကြီးတို့ကိုတွေ့ရလိုတွေ့ရငြားသွားဖို့စိတ်ကူးသွင်းထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊တစ်နေ့နေ့တော့ အိုပါးရှိရာ သမီးလာခဲ့မယ်၊စောင့်နေနော်..ဆိုပြီး တီဗီကြီးကိုအားကြီးနဲ့ဖက်ပြီးပြောထားဖူးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဒါမှမဟုတ် ဒီတိုင်း ဗဟုသုတရစေဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကိုရီးယားဟာ တရုတ်လိုပဲ စားသောက်ရာမှာ တူကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးစားသောက်ကြတဲ့ဓလေ့ရှိတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တာနဲ့အညီ တူကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနဲ့ပက်သက်ပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေထဲက အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ စားသောက်နေတဲ့ပန်းကန်ထဲမှာတူကိုစိုက်ပြီးထောင်မထားဖို့ပါပဲ။ စားပြီိးပြီးဖြစ်စေမပြီိးသေးဘူးဖြစ်စေ တူကိုဘေးမှာချထားရပါမယ်။ပန်းကန်ထဲမှာတူကိုစိုက်ထားတဲ့အဓိပ္ပါယ်ဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဆိုရင် သေခြင်းတရားနဲ့တိုက်ရိုက်ပက်သက်တယ်လို့အယူရှိကြတာဖြစ်ပြီး အသုဘတွေမှာ သဲထဲကိုတူနှစ်ချောင်းစိုက်ထားလေ့ရှိတာကြောင့် တူကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပန်းကန်ထဲမှာစိုက်မထားရပါဘူး။
တောင်ကိုရီးယားမှာ ဆေးမင်ကြောင်ထိုးခြင်းကို(ထိုးပြီးသားဖြစ်နေရင်လည်းဆေးမင်ကြောင်တွေကိုလူမြင်သူမြင်ထားခြင်းကို)ရှောင်ရှားရပါမယ်။ Tattoo တွေရှိနေခဲ့ရင်သင့်ကိုလူတွေက ဖော်ဖော်ရွေရွေခရီးဦးကြိုပြုမှာမဟုတ်တဲ့အပြင် အလုပ်တွေဘာတွေလည်းအခန့်ခံရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခုနောက်ပိုင်းတော့ အနည်းငယ်နားလည်မှုရှိလာပြီိဆိုပေမယ့်လည်း လူအများစုကတော့ တက်တူးတွေကိုမနှစ်မြို့ဆဲပါပဲ။
Srsly? အဲ့လောက်အတိုတွေဖောချင်းသောချင်းဝတ်နေတဲ့နိုင်ငံက?ဟုတ်ပါတယ်။ လည်ဟိုက်ဝတ်ခြင်းဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ လိင်ဆွဲဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်တယ်လို့နားလည်လက်ခံထားကြတာကြောင့် လည်ဟိုက်ဝတ်ခြင်းကိုရှောင်ရှားရပါမယ်။ကိုရီးယားသူလေးတွေဟာ စကပ်တိုတိုလေးတွေကိုအမြဲလိုလိုဝတ်လေ့ရှိပြီး စက်လှေကားတွေပေါ်တက်တဲ့အခါ သူတို့ကိုယ်သူတို့အိတ်တွေ၊စာအုပ်တွေနဲ့ကာကွယ်တက်ရခြင်းကိုနှစ်သက်လေ့ရှိကြပေမယ့် လည်ဟိုက်ကိုတော့ တတ်နိုင်သမျှမဝတ်မိစေဖို့သတိထားတတ်ကြပါတယ်။
ကော်ဖီိဆိုင်တွေမှာ စားပွဲထိုးအတွက် မုန့်ဖိုးမချန်ထားရဘူး
Tips ပေးတဲ့အလေ့ဟာ အမေရိကန်လိုအနောက်နိုင်ငံတွေမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွန်းကားနေပေမယ့် အရှေ့တိုင်းမှာတော့ အဲဒီ့လောက်မဟုတ်ပါဘူး။ တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားပွဲထိုးအတွက် Tips ချန်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ စော်ကားခြင်းတစ်မျိုးလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တောင်ကိုရီးယားက စားပွဲထိုးတွေဟာ လစာလုံလုံလောက်လောက်ရရှိကြလို့ပါပဲ။
အစားအစာကိုပန်းကန်ထဲမှာမချန်ခဲ့ရဘူးဆိုတာက အခြားနိုင်ငံတွေမှာပါ ရှိနေတတ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုပါ။ဒါပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားလောက်မတင်းကြပ်ပါဘူး။တောင်ကိုရီးယားမှာသင်ဟာ အိမ်တစ်အိမ်မှာဧည့်သည်လုပ်ပြီးအစားအသောက်တွေကိုမစားပဲချန်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် အိမ်ရှင်ကသင့်ကိုအော်ငေါက်တာတောင်ခံရနိုင်ပါတယ်။အစားအသောက်နဲ့ပက်သက်ရင်တောင်ကိုရီးယားတွေဟာ အဲ့ဒီိ့လောက်ကိုစိတ်ဆိုးကြပါတယ်။အကြောင်းကတော့ တောင်နဲ့မြောက်တိုိက်ပွဲတုန်းက တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ ပြင်းထန်တဲ့အငတ်ဘေးနဲ့ဒုက္ခတွေဟာ သူတို့စိတ်ထဲမှာခုချိန်ထိ ထင်ကျန်နေဆဲဖြစ်လို့ပါပဲ။
အသက်ကြီးသူတွေကိုလေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အသိစ်ိတ်ဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကလူတွေကြားမှာရှိပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် တောင်ကိုရီးယားတွေနဲ့တော့မတူပါဘူး။ တောင်ကိုရီးယားတွေမှာက အသက်ကြီးတဲ့ လူတွေကိုဘယ်လိုနေနေလေးစားရမယ်၊နားထောင်ရမယ်၊ပြန်မပြောရဘူး၊အကြီးကမှားနေပါစေ အငယ်တွေကပြန်မပြောရဘူး..အဲ့ဒီ့လိုစည်းမျဉ်းတွေရှိပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ အိုပါးတို့ရှိရာ တောင်ကိုရီးယားမြေကိုခြေချတော့မယ်ဆိုရင် အမှားတွေမလုပ်မိစေဖို့စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားသင့်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ မသွားဘူးဆိုလည်း ဗဟုသုတပေါ့နော်။ A little general knowledge won’t hurt anyone!!!
ဆယကှောသှကကှောငမှလေးတှရေဲ့အသညှးနှလုံးကိုအပိုငသှိမှးပိုကယှူငငထှားတဲ့ အသကနှဲ့မမှအောငကှိုခှောမောစတိုငကှလှနှးလှတဲ့ အိုပါးတို့ရှိရာ တောငကှိုရီးယားနိုငှငှံအကှောငှးမသိခငှကှဘူးလား ကလေးတို့ရေ… 😛 ခုပှောပှမှာကတော့ သငကှကိုရီးယားနိုငငှံကိုအလညအှပတအှနနေဲ့ခဏတာသှားမလို့ပဲဖှစဖှစှ၊ အိုပါးခနှးယောလတှို့ မှငစှာ ဒိုဂယဘှီဦးလေးကှီးတို့ကိုတှရေ့လိုတှရေ့ငှားသှားဖို့စိတကှူးသှငှးထားတာပဲဖှစဖှစှ၊တစနှနေ့တေ့ော့ အိုပါးရှိရာ သမီးလာခဲ့မယှ၊စောငှ့နနေှော..ဆိုပှီး တီဗီကှီးကိုအားကှီးနဲ့ဖကပှီးပှောထားဖူးလို့ပဲဖှစဖှစှ၊ဒါမှမဟုတှ ဒီတိုငှး ဗဟုသုတရစဖေို့ပဲဖှစဖှစှ တောငကှိုရီးယားနိုငငှံရဲ့ အခှခေံစညှးမဉှးလေးတှကေို စုစညှးဖောပှပေးလိုကပှါတယနှော။
ကိုရီးယားဟာ တရုတလှိုပဲ စားသောကှရှာမှာ တူကိုအဓိကအသုံးပှုပှီးစားသောကကှတဲ့ဓလရှေိ့တဲ့နိုငငှံတစနှိုငငှံဖှစတှာနဲ့အညီ တူကို ကိုငတှယခှငှးနဲ့ပကသှကပှီး စညှးမဉှးစညှးကမှးမှားစှာရှိပါတယှ။အဲ့ဒါတှထေဲက အရေးကှီးဆုံးတစခှုကတော့ စားသောကနှတေဲ့ပနှးကနထှဲမှာတူကိုစိုကပှီးထောငမှထားဖို့ပါပဲ။ စားပှီိးပှီးဖှစစှမပှေီိးသေးဘူးဖှစစှေ တူကိုဘေးမှာခထှားရပါမယှ။ပနှးကနထှဲမှာတူကိုစိုကထှားတဲ့အဓိပပွါယဟှာ ကိုရီးယားနိုငငှံမှာဆိုရငှ သခှငှေးတရားနဲ့တိုကရှိုကပှကသှကတှယှလှို့အယူရှိကှတာဖှစပှီး အသုဘတှမှော သဲထဲကိုတူနှစခှောငှးစိုကထှားလရှေိ့တာကှောငှ့ တူကိုဘယလှိုအခှအနမှေေိုးမှာပဲဖှစဖှစှ ပနှးကနထှဲမှာစိုကမှထားရပါဘူး။
တောငကှိုရီးယားမှာ ဆေးမငကှောငထှိုးခှငှးကို(ထိုးပှီးသားဖှစနှရငှလှညှေးဆေးမငကှောငှတှကေိုလူမှငသှူမှငထှားခှငှးကို)ရှောငရှားရပါမယှ။ Tattoo တှရှေိနခေဲ့ရငသှငှ့ကိုလူတှကေ ဖောဖှောရှရှခရေေီးဦးကှိုပှုမှာမဟုတတှဲ့အပှငှ အလုပတှဘောတှလညှေးအခနှ့ခံရမှာမဟုတပှါဘူး။ခုနောကပှိုငှးတော့ အနညှးငယနှားလညမှုရှိလာပှီိဆိုပမယှလေ့ညှး လူအမှားစုကတော့ တကတှူးတှကေိုမနှစမှို့ဆဲပါပဲ။
Srsly? အဲ့လောကအှတိုတှဖေောခငှးသောခငှးဝတနှတေဲ့နိုငငှံက?ဟုတပှါတယှ။ လညဟှိုကဝှတခှငှးဟာ တောငှကှိုရီးယားနိုငငှံမှာ လိငဆှဲဆောငခှငှးဆိုတဲ့အဓိပပွါယသှကရှောကတှယလှို့နားလညလှကခှံထားကှတာကှောငှ့ လညဟှိုကဝှတှခှငှးကိုရှောငရှားရပါမယှ။ကိုရီးယားသူလေးတှဟော စကပတှိုတိုလေးတှကေိုအမှဲလိုလိုဝတလှရှေိ့ပှီး စကလှကေားတှပေေါတှကတှဲ့အခါ သူတို့ကိုယသှူတို့အိတတှေ၊စာအုပတှနေဲ့ကာကှယတှကရှခှငှးကိုနှစသှကလှရှေိ့ကှပမယှေ့ လညဟှိုကကှိုတော့ တတနှိုငှသှမှမဝတမှိစဖေို့သတိထားတတှကှပါတယှ။
ကောဖှီိဆိုငှတှမှော စားပှဲထိုးအတှကှ မုနှ့ဖိုးမခနှထှားရဘူး
Tips ပေးတဲ့အလဟေ့ာ အမရေိကနှလှိုအနောကနှိုငငှံတှမှောကယှကှယှပှနှ့ပှနှ့ထှနှးကားနပမယှေေ့ အရှတေို့ငှးမှာတော့ အဲဒီ့လောကမှဟုတပှါဘူး။ တောငကှိုရီးယားမှာတော့ စားသောကဆှိုငတှမှော စားပှဲထိုးအတှကှ Tips ခနှထှားခဲ့တယဆှိုရငအှဲ့ဒါ စောကှားခှငှးတစမှိုးလို့ သတမှတကှပါတယှ။ဘာကှောငှ့လဲဆိုတော့ တောငကှိုရီးယားက စားပှဲထိုးတှဟော လစာလုံလုံလောကလှောကရှရှိကှလို့ပါပဲ။
အစားအစာကိုပနှးကနထှဲမှာမခနှခှဲ့ရဘူးဆိုတာက အခှားနိုငငှံတှမှောပါ ရှိနတတတှေဲ့ယဉကှေးမှုပါ။ဒါပမယှေ့ တောငကှိုရီးယားလောကမှတငှးကှပပှါဘူး။တောငကှိုရီးယားမှာသငဟှာ အိမတှစအှိမမှာဧညှ့သညလှုပပှီးအစားအသောကတှကေိုမစားပဲခနှထှားခဲ့မယှဆှိုရငှ အိမရှငကှသငှ့ကိုအောငှေါကတှာတောငခှံရနိုငှပှါတယှ။အစားအသောကနှဲ့ပကသှကရှငတှောငကှိုရီးယားတှဟော အဲ့ဒီိ့လောကကှိုစိတဆှိုးကှပါတယှ။အကှောငှးကတော့ တောငနှဲ့မှောကတှိုကပှဲတုနှးက တှကှေုံ့ခဲ့ရတဲ့ ပှငှးထနတှဲ့အငတဘှေးနဲ့ဒုကခွတှဟော သူတို့စိတထှဲမှာခုခှိနထှိ ထငကှနှနှဆေဲဖှစလှို့ပါပဲ။
အသကကှီးသူတှကေိုလေးစားရမယဆှိုတဲ့အသိစှိတဟှာ ကမဘွာတစဝှမှးကလူတှကှေားမှာရှိပှီးသားပါ။ ဒါပမယှေ့ တောငကှိုရီးယားတှနေဲ့တော့မတူပါဘူး။ တောငကှိုရီးယားတှမှောက အသကကှီးတဲ့ လူတှကေိုဘယလှိုနနလေေေးစားရမယှ၊နားထောငရှမယှ၊ပှနမှပှောရဘူး၊အကှီးကမှားနပေါစေ အငယတှကပှနှမှေပှောရဘူး..အဲ့ဒီ့လိုစညှးမဉှးတှရှေိပါတယှ။
ဒါတှကတေော့ အိုပါးတို့ရှိရာ တောငှကှိုရီးယားမှကေိုခှခတှေော့မယဆှိုရငှ အမှားတှမလေုပမှိစဖေို့စိတထှဲမှာမှတှသှားထားသငှ့တဲ့ အရာတှပေါပဲ။ မသှားဘူးဆိုလညှး ဗဟုသုတပေါ့နှော။ A little general knowledge won’t hurt anyone!!!